Ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo saddex dagaalyahan oo Al-Shabaab ah ku dilay koonfurta Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo saddex dagaalyahan oo Al-Shabaab ah ku dilay koonfurta Soomaaliya
August 18, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo howlgalo ka dhan ah Al-Shabaab ka wada koonfurta Soomaaliya.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowlada Soomaaliya oo ay taageerayaan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ayaa shalay oo Arbaco ahayd dilay ugu yaraan saddex dagaalyahan oo Al-Shabaab ah, kadib markii ay howlgal wadajir ah oo ka dhan ah Al-Shabaab ay ka sameeyeen koonfurta Soomaaliya, sida uu sheegay sarkaal.
Joe Kibet, oo ah afhayeenka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, ayaa wakaalada wararka Shiinaha ee Xinhua u sheegay in ciidamada ay weerar kedis ah ku qaadeen saldhig ay Al-Shabaab ku lahayd deegaanka Cabdala Biroole, oo qiyaastii 60 km koonfur-galbeed kaga beegan magaalo xeebeedka Kismaayo, wuxuuna sheegay in ay weerarkaas ku dileen ilaa iyo saddex dagaalyahan oo Al-Shabaab ah.
Afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada aysan wax iskacaabin ah kala kulmin howlgalkaas.
Ciidamada dowlada Soomaaliya oo ay taageerayaan kuwa AMISOM ayaa howlgalo ka dhan ah kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ka wada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
July 12, 2016 Al-Shabaab oo qabsaday magaalo xeebeedka Marka
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha degmada Godob-jiiraan Yuusuf Maxamed Faarax ayaa ka badbaaday rasaas qori oo ay la beegsadeen dablay aan la aqoon. Dhacdada ayaa fiidnimadii Axada ka dhacday makhaayad kutaala degmada, sida uu sheegay guddoomiyaha. “Waxaanu [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Puntland, Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas), ayaa maanta qorshuhu yahay inay tagaan magalada Bosaso xarunta gobolka Bari isagoo kasoo kicitimay goor dhaweyn caasumadda Soomaaliya ee Muqdishu, halkaas oo uga qayb [...]